Global Voices teny Malagasy » Bolivia: Fifandirana Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Bolivia: Fifandirana Anaty Aterineto
Voadika ny 10 Septambra 2017 14:22 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Amerika Latina, Bolivia, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Lahatsary nalain'i Estotaweno, ahitàna ireo vahoaka marobe avy amin'ny “Tanora ho an'ny Demokrasia”, namaky ny laharan'ny mpitandro filaminana mizotra mankamina mety ho fifandonana tamin'ireo mpamboly Coca tany Cochabamba.
Nahazo anarana “Janoary Mainty” sahady ny 11 Janoary 2007 noho ny fifandonan'ny samy olom-pirenena izay nahafatesana olona roa sy naharatrana olona an-jatony  tao an-tanànan'i Cochabamba. Ny volana Oktobra 2006, nanontany ilay mpitoraka bilaogin'ny Guccio [Es], Carlos Gustavo Machiado Salas, ” Inona izany no lokon'ity Oktobra ity ? ” raha nilaza ilay fifandonana iray hafa teo amin'ny samy olom-pirenena tao amin'ny tanàndehiben'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ao Huanuni, izay nahafatesana olona maro noho ny niseho tao Cochabamba izy. Efa nisy ny “Oktobra Mainty” taorian'ny fikorontanana tamin'ny Oktobra 2003 izay nahatonga ny fametraham-pialàn'i Gonzalo Sanchez de Lozada ary efa noheverina ho ” Febroary Mainty” ilay fifandonana iray hafa tamin'ny volana Febroary 2003. Ny mahatonga ny “Janoary Mainty 2007″ ho hafa noho ireo volana hafa izay nahafatesana boliviana taminà herisetra an-dàlambe di noho izy nitranga nandritra ny firoboroboan'ny haino aman-jerin'ny olom-pirenena sy ireo rindrambaiko hafa ahafahana mandray anjara. Iray amin'ireo mpitoraka bilaogy vitsy izay nitoraka bilaogy ny zava-nisy tamin'ny Oktobra 2003 i Miguel Centellas avy any Ciao! izay nandany fotoana fohy tamin'ny vatsimpianarany Fulbright tany La Paz. Ny tantarany isanandro tahaka ny olona niaina tamin'ireo sakana nahatonga ny fiainana ho mafy tany La Paz no loharanom-baovao iray nanandanja nandritra izay fotoana izay. Hatramin'izay ka hatramin'izao zara raha nisy ny fandrakofana kely avy amin'ireo olom-pirenena tsy mpanao gazety.
Raha hikisahana haingana ho amin'ny Janoary 2007 ary ireo boliviana maro nampiasa ny rindrambaiko toy ny Flickr sy ny Youtube hampakarany ny zavatra hitan'ny masony avy amin'ny tfomba fijery mankamin'ny tombontsoany tamin'io andro io.
Ny mpampiasa Flickr, Miskifotitos,  no iray amin'ireo voalohany nampakatra ireo sarin'ny diabe sy ireo fihaonambe. Na izany aza, hitany ny fomba sarotra indrindra izay, na eo aza ny fanasokajiana mazava amin'ny Creative Common, dia mbola hita any amin'ireo bilaogy hafa foana ilay sary nefa tsy nahazoana alàlana. Tany an-toerana ihany koa ilay mpanao gazety mpaka sary iray, Jimena Bautista , Breziliana miaraka miasa amin'ny gazety Los Tiempos ao an-toerana mba hirakitra an-tsary ny tohiny, isan'izany sary tena mazavan'ny iray amin'ireo maty ( tandremo : ilaina ny fahaiza-mandanjlanjan'ny mpijery) sy sarin'ny vahoaka milanja vatampatin'ilay iray hafa mamakivaky ny tanàna.
Kely fotsiny no voasoratr'i Cochabambinos teny an-toerana, nefa tena adihevitra mafana teo amin'ireo boliviana any ivelany ilay fifandonana. I Jim Schultz, avy ao amin'ny bilaogy D emocracy Center  no iray teny an-toerana tamin'io fotoana io. Nahasarika tsikera maro teo amin'ny sehatry ny fanehoankevitra ny fitantaràny isanandro, satria maro no nilaza hoe nitanla izy tamin'ny tati-baovao ataony.
Nirakitra an-tsary avy eny ambonin'ny trano mijoalajoala voaaro amin'ny fanelingelenana ireo mpisera toa an-dry Estotaweno  ary naka lahatsary telo samihafa an'izay toerana iray izay ihany tamin'ny fotoana samihafa nandritra ny tontolo andro i Nenamade. 
Nampakatra lahatsary anankiroa [1  tati-baovaon'ny fahitalavitra Boliviana, 2 ] ilay mpitoraka bilaogy Morir Antes Esclavos Vivir [ES] , lahatsary izay hitan'ireo mpitoraka bilaogy toa an-dry Andres Pucci  sy Hugo Miranda  fa tena mahaliana. Nasehon'io lahatsary io fa ilay tovolahy 17 taona, Cristian Urresti, izay maty nandritra ny fifandonana dia maty taorian'ny niarovana azy tao anaty trano. Narovan'ny mponina ilay tovolahy, nefa nilainy ny ho entina any amin'ny hopitaly. Fa na izany aza, noraràn'ireo mpanohitra tao ivelan'ny trano ny hetsika tahaka izany ary farany dia maty ilay tovolahy, ka nampisahotaka ny mponina.
Nohamafisin'ilay fijoroana vavolombelona tao amin'ny tantara fa nirakitra an-tsary ny zavatra rehetra nitranga taminà fakàntsary ireo cocaleros (mpamboly coca ). Azon'io lahatsary io hamafisina ny momba izay tomponandraikitra tamin'ilay fahafatesana feno herisetra, nefa tena azo antoka fa tsy ho hitan'io lahatsary io mihitsy ny làlana mankany amin'ireo tranonkala toy ny YouTube.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/10/106736/
 fifandonan'ny samy olom-pirenena izay nahafatesana olona roa sy naharatrana olona an-jatony : https://www.globalvoicesonline.org/2007/01/12/cochabamba-in-mourning-bolivian-bloggers-react/
 Inona izany no lokon'ity Oktobra ity ?: http://guccios.blogspot.com/2006/10/which-color-for-this-october.html
 nitoraka bilaogy ny zava-nisy tamin'ny Oktobra 2003 : http://www.centellas.org/miguel/archives/2003_10.html
 Jimena Bautista: http://flickr.com/photos/jimenabautista/
 bilaogy D: http://www.democracyctr.org/blog
 Morir Antes Esclavos Vivir [ES]: http://maquev.blogspot.com/index.html
 Andres Pucci: http://andrespucci.blogspot.com/2007/01/justicia-para-cristian-urresti.html
 Hugo Miranda: http://angelcaido666x.blogspot.com/2007/01/cristian-urresti-lo-que-ocurrio-segun.html